WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ app | Androidsis
WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ app
ကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးသောအက်ပလီကေးရှင်းများကြိုးစားပြီးနောက် WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ထိရောက်စွာဖန်တီးပါနောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာစံပြလျှောက်လွှာကိုတွေ့ပြီလို့ထင်တယ်။
နောက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြနိူင်တဲ့ application ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမှာပါ အပြည့်အဝကူညီလမ်းအတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ပြခန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသောသို့မဟုတ်၎င်း၏ကင်မရာနှင့်တိုက်ရိုက်ရိုက်ယူခဲ့သောမည်သည့်ပုံမှမဆို။ ဤအရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်သောအဆင့်များ၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုမည့်အဆင့်အနည်းငယ်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လျှောက်လွှာဟုခေါ်သည် စတစ်ကာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို, ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သော Google Play Store၊ Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဘာမှမကူးယူခင်မှာသင်သိထားသင့်သည် WhatsApp ကို update ဤအလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးစွဲနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါတို့နှင့်အတူစုစည်းရှိသည် WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာများ သင်သည်လည်းသူတို့ကိုချစ်လိမ့်မည်။
1 Sticker Maker ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Sticker Maker မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသမျှ၊ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်လျှောက်လွှာ
Sticker Maker ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Sticker Maker မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသမျှ၊ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်လျှောက်လွှာ
Sticker Maker ဆိုသည်မှာကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖြစ်သော WhatsApp ကိုရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် upload ပြုလုပ်ရန်မည်သူမဆိုအတွက်နောက်ဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။ မည်သူမည်သူမဆိုပုံတည်းဖြတ်ရန်စိတ်ကူးမရှိသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.
ထို့ကြောင့်ကလေးကစားခြင်းကဲ့သို့အပြည့်အဝကူညီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်လိမ့်မည် မည်သည့် image file မှမဆို WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများပြုလုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်တည်ခင်းည့်ခံသော။ ကျွန်ုပ်တို့၏သို့မဟုတ် Androids ကင်မရာ၏အကူအညီဖြင့်ထိုနေရာတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
asi ကျနော်တို့ပုံတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများရှိသည် အရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ရန်၊ outရိယာတစ်ခုကိုဖြတ်ပစ်ရန်၊ ပုံကိုလှန်ရန်သို့မဟုတ် WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများအတွက်အကောင်းဆုံးသော rounded shape တစ်ခုကိုပင်ပေးရမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ WhatsApp သို့တင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စတစ်ကာများ၏နောက်ဆုံးရလဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပေါ်သို့တင်ထားသောစတစ်ကာတစ်ခုစီအတွက်ထည့်သွင်းရန်ပုံရိပ်များ၏ရွေးချယ်မှုထဲသို့ထည့်ထားသည့်အရည်အသွေးနှင့်အားထုတ်မှုအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင် Stickers Pack.
ရလဒ်ကောင်းနိုင်ဖို့အတွက် WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်သင်သုံးသောပုံရိပ်များ၊ Google မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလေ့ရှိတဲ့ပုံများ၊ ပွင့်လင်းနှင့်အတူ PNG format နဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ကြသည်.
သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင် Photos များကိုဖန်တီးရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန် Photoshop, Gimp သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုခုသို့မဟုတ် application တစ်ခုခုနှင့်လည်းအကြံဥာဏ်များရှိပါကသင်၏ပရိုဂရမ်၏ရလဒ် WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများ ငါသူတို့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်အာမခံနိုင်ပါတယ်။
ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းထည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖန်တီးထားသောစတစ်ကာအထုပ်များကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည် သိုမဟုတ် Sticker pack တစ်ခုထက်ပိုလျှင် upload လုပ်ပါ၊ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံး application များမှသံသယမရှိပါ။
စတစ်ကာများမွေ့လျော်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ wasap အခမဲ့ download လုပ်ပါ သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်မှာ၊ အပြင်၊ whatsapp ၏နောက်ဆုံး version ဒီအင်္ဂါရပ်ကို enable လုပ်ဖို့။ သင့်တွင်အဟောင်းတစ်ခုရှိပါကစတစ်ကာများပို့။ မရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ app
စပိန်ကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးထားသောအကောင်းဆုံး Android application များ